Gajim oo ah macmiil fara badan oo macaamil | Laga soo bilaabo Linux
Maxwell | | Aplicaciones, GNU / Linux, Kuwa kale, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maxaa jira, bulshada? Mar labaad halkan ayaa kuu keenaya xoogaa faa iido ah. Immisa naga mid ah ayaa aan isticmaalin Rasuulka,, hubaal dhammaan (qaar ilaa heer uu ku dhaco qufac xun, qufac), oo hadda leh buuq ay sababeen baraha bulshada; adeegsiga iyaga ayaa dabayl labaad siiyay dalabka noocan ah. Maanta waxaan ka hadli doonaa wax yar oo weyn oo aan la garanaynin fariintan deg dega ah, waxaan ula jeedaa Gajim.
Waxaa laga yaabaa in badan oo idinka mid ah inay xusuusan doonaan Gajim, a macmiilka fariinta ugu qoran Python shabakadda Jabber / XMPP. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxay leedahay taageerada IRC, shir-jaraa'id, maqal, taageero xisaab badan iyo 25 luqadood oo la heli karo. In kasta oo ay taasi jirto, waxay u baahan tahay ku-tiirsanaan iyo ilo aad u yar. Magaciisu waa soo gaabinta weedha «Gajim waa jabber farriin deg deg ah".
Waxa hadda na keenay wuxuu ka yimid dhowr maalmood ka hor, halka aniga iyo qof aan naqaannay oo aan ka doodaynay taas macmiilka farriinta garaafka ah waxay kufiicnayd in loogu isticmaalo rakibidda iceWM ugu yaraan. In kastoo Pidgin iyo Naxariis waxay hayaan wax kasta oo qofku weydiisan karo maalmahan, iyaga liiska ku tiirsanaanta dib ayey noo soo tuureen. Ilaa aan dib u eegnay dukumintiyada Gajim xoogaa, waxaan la nimid wixii aan dooneynay.
Markaad iska diiwaangeliso server Jabber ah, waxay na siisaa magac isticmaale iyo naanays si aan u isticmaalno; laakiin dib u eegista liisaska adeegaha la heli karo, waxaan u kuurgalnay in qaarkood ay taageero u hayaan adeegyada kale ee farriimaha, sida ICQ, Yahoo, MSN, IRC, identi.ca, Twitter, FUDUD, GaduGadu, AIM, Facebook, in la sameeyo sida boostada macmiilka iyada oo loo marayo Jabber Mail, iyo xitaa adeegga moobiilka adoo maraya farriimaha qoraalka.
Laakiin sida loo kiciyo dhammaan adeegyadan?
Xeeladdu waxay ku jiifsan tahay ogaanshaha dooro server adeegyadan, tusaalahan waxaan ku isticmaalnay serverka jabber.hot-chilli.net (hadda wuxuu ku socdaa hoosta ejabberd 2.1.10), iyo isticmaalka gaadiidka, wuxuu na siinayaa inaan dhammaan xiriiradayada meel isugu geyno.
Waad dooran kartaa mid kale oo ku habboon baahiyahaaga, kaliya waa inaad dib u eegis ku sameysaa liiska ku yaal tan isku xidho jabberes.org.
Waxa kaliya ee ay tahay inaan sameyno ayaa ah diiwaan koonto Jabber ah at jabber.hot-chilli.net:
Qor Captcha tusay, furitaanka cinwaanka sawirka biraawsarkayaga.
Waxqabadyada tag xulashada Soo hel adeegyada.
Markaad dhammeyso rarista bogga, gaadiidka kor ku xusan ee la soo sheegay ayaa la soo bandhigi doonaa, xulo adeegga la doonayo oo guji Isku qor.
Hadda waa inaan qornaa oo keliya username iyo password, tusaalaha Yahoo Messenger. Dhamaadka tan, isku xirku wuu bilaabmi doonaa.
Waan dhamaynay, way ka fududeyd sidaad moodeysay, sax? Iyo in laga fikiro in xalka uu hortayada hor yaallo. Waan marayay, Oo sidee baan u rakibaa?, Gajim badanaa wuxuu ku jiraa keydadka diyaar u ah in la isticmaalo, tani waa:
Gajim iyo gaadiid
Waxaan u nimid dhamaadka maqaalkan, anaga oo xalinayna dhibaatada bilowga ah isla markaana diyaar u ah inaanu la sheekaysano xiriiradayada hab maamuusyo kala duwan isla waqti isku mid ah.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan sii wadaynaa inaan sugno helitaanka tabo iyo xalal badan, kuwa badan oo kamid ah ayaa lagu iloobay wikis. Waxaan rajeynayaa dabcan, inay faa'iido laheyd.
Isbeddel iyo dibedba, waxaan dib u akhrin doonnaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Gajim oo ah macmiil macaamil badan
Aad u fiican, in kastoo aanan waligey ku isticmaalin xulashooyinkaan Gajim. Laakiin si cadaalad ah, waxaan u maleynayay inaan wax ka yaraanayay Pidgin mana ahan.
Sidee la yaab leh, maaddaama kiiskeyga uu yahay mid ka soo horjeedda, wuxuu cunaa inta u dhexeysa 40 iyo 50 MB halka Pidgin uu dhaafayo 100, waxay noqon doontaa arrin ku saabsan qaabeynta.
Xaqiiq ahaan, ma la shaqaysaa Gmail?
Sababtoo ah weligey ma aanan isticmaalin Rasuulka, waxaan u maleynayaa in ugu badnaan aan isticmaali doono 5 jeer oo la tiriyey ... Antisocials uma baahna
Dabcan, waa inaad dhigtaa Server-ka Gmail halkii aad ka heli laheyd midka caadiga ah oo aad u dejiso magaca martida "talk.google.com". Haddii aad ula jeeddo adeegga boostada, waxay la mid tahay sameynta koonto macaamiil guud.
Waxaan u istcimaalaa sidii caadiga ahayd inaan ku jabiyo Linux iyo Windows labadaba, aniga ahaan aniga ayaa ugu fiican, waan jeclahay 😉
Xiiso leh, kama aanan aqoon doorashadan. Talo ahaan: way fiicnaan laheyd haddii mid kamid ah tifaftirayaasha inuu cashar ka bixiyo Jabber. Mahadsanid, sida had iyo jeer.
Ma ku saabsan Jabber sida borotokoolka XMPP ama ku saabsan Jabber.org?